ကမ်ဘာပျေါမှာဘာသာမဲ့အမြားဆုံးနထေိုငျသောနိုငျငံမြားအကွောငျး – PwintSan
ယခုတဈပတျမှာပရိတျသတျကွီးကိုတငျဆကျပေးခွငျတာကတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘာသာမဲ့အမြားဆုံးနထေိုငျတဲ့နိုငျငံမြားအကွောငျးကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ပွောပွပေးသှားမှာပဲဖဈပါတယျ။
ကမျဘာပျေါရှိဆငျးရဲသောနိုငျငံမြားကို ကူညီလြှုဒါနျးရာတှငျ ကမျဘာ့နံပါတျတဈ အမြားဆုံးဖွဈသောနိုငျငံ၊ IT နညျးပညာ ထိပျတနျးနိုငျငံတဈခုဖွဈသညျ။
စိတျခမျြးသာပြျောရှငျဖှယျ အကောငျးဆုံးနိုငျငံအဖွဈအသိမှတျပွုခံထားရပွီး ဆှီဒငျကဲ့သို. ဆငျးရဲသောနိုငျငံမြားအား လြှုဒါနျးမှုမွငျ့မားသောနိုငျငံဖွဈသညျ။
UNDP မွ နထေိုငျရနျအသငျ့တျောဆုံးအဖွဈ သတျမှတျထားခွငျးခံရသောနိုငျငံ ဒုက်ခသညျမြားကိုကူညီစောငျ့ရှောကျပေးသောနိုငျငံ၊ လူအခှငျ့အရေးအလှနျမွငျ့မားသောနိုငျငံဖွဈသညျ။
အေးခမျြးစှာနထေိုငျတတျသော လူအမြားစုနထေိုငျပွီးနှဈစဉျအနောကျနိုငျငံမြားတှငျ သခြာင်ျရမှတျအားနှငျ့ စာဖတျစှမျးရညျရမှတျအား အမြားဆုံးနိုငျငံအဖွဈသတျမှတျခံထားရသညျ။
စီးပှားရေးအငျအားတောငျ့တငျးသောနိုငျငံ၊ အာရှရှိဆငျးရဲသောနိုငျငံမြားတှငျ စာသငျကြောငျးနှငျ့ အခွားအကူအညီမြားပေးသောနိုငျငံ၊ လူတဈဦးခွငျး ကိုယျပိုငျအသိစိတျဖွငျ့ စညျးကမျးရှိသောနိုငျငံ၊ နညျးပညာအဆငျ့မွငျ့သောနိုငျငံဖွဈသညျ။
GDP နှဈစဉျမွငျ့တကျနသေောနိုငျငံ စညျးကမျးကောငျးသောနိုငျငံ၊ ဂပြနျကဲ့သို့နညျးပညာကောငျးသောနိုငျငံ၊ ၎င်းငျးတို့၏ ဖကျရှငျနှငျ့ရုပျသံဇတျလမျးမြားကို ပွညျပနိုငျငံမြားကို လှမျမိုးအောငျစှမျးဆောငျနိုငျသောနိုငျငံဖွဈသညျ။
( မှတျခကျြ )ဆငျးရဲ၍၊ တီထှငျဖနျတီးမှုဉာဏျစှမျးမရှိသော၊ ပဋိပက်ခမြားပေါမြားသော၊ စဈပှဲမြားအတောမသတျသောနိုငျငံမြား အတတျပညာနညျးပါး၍၊လူအခှငျ့အရေးအားနညျးသောနိုငျငံမြားကိုကွညျ့လြှငျဘာသာတရားအလှနျကိုငျးရှိုငျးသောနိုငျငံမြားဖွဈနသေညျကိုတှေ.ရပမေညျ။
ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသညျ ( ၉၉.၉ % ) ဘာသာတရားကိုငျးရှိုငျးသူမြားနထေိုငျပွီး ပဋိပက်ခအဖွဈမြားဆုံး၊ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုမရှိဆုံးနိငျငံဖွဈသောကွောငျ့ UNDP မွ ကမျဘာပျေါတှငျနထေိုငျရနျမသငျ့ဆုံးနိုငျငံအဖွဈသတျမှတျထားပါသညျ။
ယခုတစ်ပတ်မှာပရိတ်သတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်တာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာမဲ့အများဆုံးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံများအကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကို ကူညီလျှုဒါန်းရာတွင် ကမ်ဘာ့နံပါတ်တစ် အများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ငံ၊ IT နည်းပညာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရပြီး ဆွီဒင်ကဲ့သို. ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအား လျှုဒါန်းမှုမြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
UNDP မြ နေထိုင်ရန်အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသောနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်များကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသောနိုင်ငံ၊ လူအခွင့်အရေးအလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အေးချမ်းစွာနေထိုင်တတ်သော လူအများစုနေထိုင်ပြီးနှစ်စဉ်အနောက်နိုင်ငံများတွင် သချာင်္ရမှတ်အားနှင့် စာဖတ်စွမ်းရည်ရမှတ်အား အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသည်။
စီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံ၊ အာရှရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် အခြားအကူအညီများပေးသောနိုင်ငံ၊ လူတစ်ဦးခြင်း ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဖြင့် စည်းကမ်းရှိသောနိုင်ငံ၊ နည်းပညာအဆင့်မြင့်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
GDP နှစ်စဉ်မြင့်တက်နေသောနိုင်ငံ စည်းကမ်းကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ဂျပန်ကဲ့သို့နည်းပညာကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့၏ ဖက်ရှင်နှင့်ရုပ်သံဇတ်လမ်းများကို ပြည်ပနိုင်ငံများကို လွှမ်မိုးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
( မှတ်ချက် )ဆင်းရဲ၍၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုဉာဏ်စွမ်းမရှိသော၊ ပဋိပက္ခများပေါများသော၊ စစ်ပွဲများအတောမသတ်သောနိုင်ငံများ အတတ်ပညာနည်းပါး၍၊လူအခွင့်အရေးအားနည်းသောနိုင်ငံများကိုကြည့်လျှင်ဘာသာတရားအလွန်ကိုင်းရှိုင်းသောနိုင်ငံများဖြစ်နေသည်ကိုတွေ.ရပေမည်။
ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည် ( ၉၉.၉ % ) ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများနေထိုင်ပြီး ပဋိပက္ခအဖြစ်များဆုံး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိဆုံးနိင်ငံဖြစ်သောကြောင့် UNDP မြ ကမ်ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်မသင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။